Adeeg - YiZheng Makiinado Culus Co., Ltd.
Adeegyada horay loo sii iibiyay: waxay bixiyaan naqshad mashruuc, qaabeynta qaabeynta, qorsheynta qalabka ku habboon, iyadoo loo eegayo baahiyahaaga gaarka ah, naqshadeynta iyo soo saaridda alaabooyinka, tababaridda hawl wadeennada farsamada adiga.
Adeegga iibka ah: ayaa ku wehelinaya adiga si aad u dhammaystirto aqbalaadda qalabka, ka caawiso sameynta qorshaha dhismaha iyo hannaanka faahfaahsan.
Adeegga iibka ka dib: wuxuu ku siin karaa hagitaan goobta ku saabsan rakibidda qalabka, ka-saarista goobta iyo tababarka hawlwadeennada.
YiZheng culus Makiinado Co., Ltd. waa khabiir ku ah qalabka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah iyo qalabka soo saarista bacriminta isku dhafan. Meel kasta oo ay joogto, shirkaddu waxay "ka dhigtaa ixtiraamka qiyamka bulshada iyo caadooyinka bulshada" xukunkeeda koowaad.
Intii lagu guda jiray fulinta ganacsiga caalamiga ah iyo raadinta kobaca macaashka, Yizheng had iyo jeer waxay ilaalisay ilaalinta deegaanka meesha ugu horeysa waxayna kawada shaqeysay horumarka waara ee dhaqaalaha adduunka.
Iyada oo leh dareen adag oo masuuliyad bulsho ah, Yizheng waxay u qaadataa samafal hadaf kale oo shirkadeed. Waxqabadyada ku deeqida iskuulada iyo caawinta dadka saboolka ah dhammaantood waxay ka sheekeeyaan sheekada Yizheng.
Mustaqbalka, shirkadeena waxay leedahay go'aaminta iyo kalsoonida, iyadoo la adeegsanayo fikradda sayniska, wajaheysa nettle, ku dadaalayso heer sare, waxaan la leenahay adeeg maskax leh, tikniyoolajiyad aad u fiican iyo alaab tayo leh si loo raadsado iskaashi guul-guul ah.
Waxaan si diirran u soo dhaweyneynaa dhammaantiin inaad halkan soo booqdaan si aan u raadino fursado badan oo iskaashi.